स्वस्थ्य Archives - sandeshpost
Home > Archive by Category स्वस्थ्य
आँखा कमजोर छन् ? आँखामा तेजिलोपना बढाउन यी छन् घरेलु १० उपाय
December 12, 2018 admin16
लगातार घण्टौसम्म काम गर्नाले, निद्रा पुरा भएन भने तथा धेरैबेर सम्म मोवाइल कम्प्युटरमा बसिरहनाले आँखा कमजोर हुदै जान्छ । आखा कमजोर भएपछि सानै उमेरमा देखि चस्मा लगाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । तर आयुर्वेदका यस्ता केहि घरेलु उपचार छन्, यी उपाय अपनाएमा आखाको तेज बढ्दै जान्छ र चस्मा लगाउनै पर्दैन । १. हरियो साग- रायो, मेथि, […]
December 12, 2018 admin11
स्वस्थ रहने भन्नासाथ हामी शरीरको तौल नियन्त्रण गर्ने र मोटोपना घटाउने कुरा मात्रै गर्छौं । तर, स्वस्थ, जवान र चुस्त रहनको लागि मोटोपना घटाउनुमात्रै पर्याप्त छैन पक्कै पनि । हाम्रो शरीरका भित्री अंगहरुको हिफाजत पनि उत्तिकै आवश्यक छ । शरीरभित्रको अति महत्वपूर्ण एक अंग हो मुटु । शरीरका प्रत्येक अंगमा आवश्यक रगतको आपूर्ति गर्ने काम […]
December 12, 2018 admin38
काठमाडौं । हाम्रो वरपर हामीसँग धेरैं रोगहरुको सरल उपचार हुन्छ तर हामी त्यसका बारेमा ख्याल गर्दैनौं । जुन बेला हाम्रो समाजमा अस्पताल थिएनन त्यो बेला पनि मान्छेहरु बिरामी हुन्थे र जडिबुटीको सहयोगमा निको हुन्थे आज हामी त्यसैं मध्यको मह र कागतिको कुरा गर्दैछौं । जाडो होस या गर्मी मह र कागती सधै खाने गर्नाले हामी […]
मलद्धारमा रहेको भेरिकोज नलीमा दबाब परेमा पायल्स हुने गर्छ । यस्तो दवावले उक्त नली चर्कने, फुट्ने वा त्यसमा चिरा पर्ने गर्छ । जसले गर्दा मलद्वारमा चरम पिडा हुन्छ र कतिपयमा अत्यधिक रक्तश्रावसमेत हुन्छ ।
December 12, 2018 admin21
नेपालमा पायल्सबाट पिडितहरुको संख्या निकै ठूलो छ । तर, गोप्य अंगसँग सम्वन्धित भएकाले धेरैले यो रोग लुकाएर पनि बसेका छन् । पाइल्सको समस्या विशेषगरी गर्भावस्था, खानपानमा गडबडी, कब्जियत वा दिशा गर्दा बढि जोड लगाउनाले हुने गर्छ । पायल्सलाई अंगे्रजीमा हेमाराइड पनि भनिन्छ । मलद्धारमा रहेको भेरिकोज नलीमा दबाब परेमा पायल्स हुने गर्छ । यस्तो दवावले […]
December 12, 2018 admin10
गलत खानपान र जीवनशैलीका कारण अहिलेका मानिसहरु अनेक प्रकारका रोगको शिकार बनिरहेका छन् । चाहे मधुमेह होस् वा उच्च रक्तचाप, थाइराइड होस् वा क्यान्सर सबै रोग खानपान र जीवनशैलीसँगै जोडिन्छन् । यसरी अनेकन रोगले थलिदै गएको ज्यानलाई कसरी तन्दुरुस्त बनाउने ? कसरी स्वस्थ एवं निरोगी हुने ? अस्पताल धाएर ? औषधी खाएर ? शल्यक्रिया गरेर […]
December 12, 2018 admin26
काठमाडौं – महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापनसम्बन्धी बृहत् परामर्श कार्यशाला गोष्ठी मंगलबार सम्पन्न भएको छ ।मेन्सस्ट्रुएसन विश्रामका लागि समय छैन, प्रत्येक नेपाली किशोरी महिनावारीका बेला अघि बढ्न सकुन् भनेर सुनिश्चित गरौँ विषयका उक्त गोष्ठीमा छोरी मान्छे १० बर्षदेखि १६ बर्षको हुँदा पहिलोपटक महिनावारी, महिनावारी चक्र शुरु हुने बताईएको छ । कार्यक्रममा कोलम्बियाका युनिभर्सिटीकी डा. मेरनी शोभरले महिनावारी […]
बिहान दुध खानु शरीरका लागि रोग निम्त्याउनु जस्तै हो ?
काठमाडौं । दुध पिउदा शरीरमा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । खाएको खानेकुरा खाँदा पचेमा त्यसले फाइदा गर्छ । तसर्थ दुध हाम्रो भोजनको महत्वपूर्ण अंश हो । विशेष गरी शाकाहारीका लागि नभई नहुने पोषण हो । दुधले पाचन प्रणालीमा सहयोग गर्छ, पोषण प्राप्त गर्छ र शरीरका दोषलाई सन्तुलन गर्न सहयोग गर्छ । आयुर्वेद अनुसार मानव शरीर तीन […]
मोबाइल धेरै चलाउनु मानिसका लागि निकै खतरनाक , यस्ता छन् साइड इफेक्ट !
December 11, 2018 December 11, 2018 admin21
मोबाइल मानिसका लागि अत्यावश्यक बनिसकेको छ । यो जीवनकै महत्वपूर्ण हिस्सा बन्न पुगेको छ । तर, यसको प्रयोगमा भने सजगता अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । यसबाट निस्कने रेडिएसन मानिसका लागि निकै खतरनाक हुने प्रमाणित भएको छ । मोबाइलको बढी प्रयोगले कन्फ्युजन बढ्नुका साथै निर्णय लिने क्षमतामा समस्या पर्ने रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । ब्रिटेन, अमेरिका र […]
चाँडै गर्भवती हुन चाहानुहुन्छ? यी हुन् १० उपायहरु
December 11, 2018 admin100
मंसिरलाई विवाहको महिना मानिएपनि हिन्दु समाजमा विवाह हुने धेरै महिनाहरु रहेका छन् । हामी कहाँ माघ, फागुन, चैत्र, बैशाख, जेठ, असार, भदौं र असोज महिनामा पनि विवाहवारी चल्ने गरेको छ । तर पनि धेरै युवायुवतीले मंसिरलाई नै विवाह गर्ने सोचाई बनाउने गरेका हुन्छन् । विवाह गरेपछि सन्तानको आशा पनि स्वभाविक रुपमा बढ्ने नै गर्छ । […]
December 11, 2018 admin89
अन्डा अर्थात कुखुरा लगायत पन्छीको फूल प्रोटिनको उच्च स्रोत हो । अन्डा खानमा स्वादिष्ट मात्र होइन पोषणका दृष्टिले पनि उपयोगी हुन्छ । विभिन्न प्रकारका रोग लागेका बेला अन्डाले बिरामीलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । अन्डाका यिनै गुणहरुका कारण पोषणविदहरु अन्डा खान रुचाउँछन् । अन्डाको सेतो र पहेँलो दुवै भाग पोषणका दृष्टिले मह्त्वपूर्ण मानिन्छ अन्डाको सेतो भागमा विभिन्न […]
श्रीमान बिदेश भएकी महिलालाई बलात्कार गर्न खोज्नेलाई जुत्ताको माला र २… (149)
भगवानका पाला देखिनै यौन सम्पर्क गर्ने सयौ तरिका भए पनि महिलाहरूलाई मन… (51)